1954-1964 Evinrude 5.5 HP Akụ-UP Project mgbanye System Akụ-Up | Outboard Boat Motor Mmezi
1954-1964 Evinrude 5.5 HP Akụ-UP Project mgbanye System Akụ-Up
Ewezuga ụzụ na nkwụnye wired, usoro nkwụnye ọkụ niile dị n'okpuru windo. Ụdị magneto mgbanye a moto bụ Flywheel Magneto na-emebi Points. OMC jiri otu Universal Magneto na ọtụtụ n'ime ha obere outboards si 50 elu ruo n'oge na-adịbeghị anya mgbe ha malitere iji mgbagwoju eletriki. Ọrụ nke mgbanye usoro bụ n'ịwa ezuru voltaji (Gburugburu 20,000 volts) na-awụlikwa elu na ọdịiche na icheku ọkụ plọg, eke a icheku ọkụ na-amụnye na mmanụ ụgbọala / ikuku ngwakọta, na iji jide n'aka na voltaji na-anapụta ihe ji nkwụnye na kpọmkwem nri oge.
Wepu Flywheel aku - Ghichaa nku ohia. Iji ogho elekere 3 / 4 ma ọ bụ ntanye ọzọ, wepụ mmanụ nkwụ. Ị ga-achọ ihe iji jide ọdụ ụgbọ elu ka i wee nwee ike itinye ihe mgbochi na nut ahụ ka ị na-ejide eriri ahụ ka ọ ghara iwere ya na nut. E nwere ngwá ọrụ pụrụ iche maka nke a mana ana m eji ya eriri spana na onye nyere m maka Christmas afọ ole na ole gara aga. Agụla m ebe ụfọdụ ndị mmadụ ga-ejide eriri eriri na oghere ahụ ka a ga-egbochi piston tupu ị gaa Top Dead Center, ya mere, na-ejide eriri ahụ ka ị nwee ike wepu ya. Echere m na nke a nwere ike imebi engine ahụ site na itinye nrụgide dị ukwuu na mkpara njikọ. Ọzọkwa, agụwo m na nkwurịta okwu na a pụrụ ịdọpụ eriri ahụ ịhapụ otu eriri na cylinder
Tọpụ Flywheel aku
Nkume Flywheel aku ikpe On
.Wepu Flywheel - E nwere ụzọ abụọ iji wepu nku ahụ, dabere na ngwá ọrụ ị nwere. Ọtụtụ ndị ọkachamara ga-akwado ka ị jiri flywheel puller. I nwere ike ịgbazite n'iru wheel puller si mpaghara gị ngwá ọrụ mgbazinye shop ma ọ bụ ị pụrụ ịzụta a ihe kwesịrị ekwesị. Iji puller bu ụzọ kachasị nchebe iji gbochie ikwe ma ọ bụ na-agbapụ ọkụ. Ịchọrọ ikpo ọkụ nke na-ejikọta oghere atọ ahụ na-emeghe iji wepu ya. Ejila oghere nke na-adọta n'elu ọnụ elu nke ikuku.
Enweta na Flywheel na ebuli Cover
Ebuli Flywheel Cover
Tinye Flywheel aku azụ Crankshaft
Old mgbanye System
Nke ozo, uzo ozo bu uzo iji kpoo nku azu bu iji wepu opu ohia na ebe o di ntakiri n'elu ogwu. Site na nnukwu screwdriver isi na onye na-agba nchara, ejighị ya kpọrọ enweta gbadaa na nku ogwu ka ọ na-arị elu n'elu ala nke ikuku ahụ na onye na-arụ ọrụ. Jide n'aka na ị na-amị elu n'elu nku ahụ n'onwe gị site na ijide n'aka na ọ bụ akụkụ ahụ nke na-atụgharị ma ọ bụghị akụkụ nke dị. Tụgharịa igwe 1 / 4 ahụ ma pịaghachi ọzọ ma kwuogharịa ruo mgbe ikpo ọkụ ahụ dị. Ọkpụkpọ ahụ kwesịrị ịtọpụ mgbe ọ gachara obere ngwongwo ole na ole ma nwee ike ibupụ ya mgbe ọ wepụsịrị nku ahụ. Ihe ize ndụ dị na usoro a bụ na ọ bụrụ na ị na-agbanye ike na hama, ị nwere ike ịkụtu ya.
Dochie mgbanye Parts
The mgbanye akụkụ dị n'okpuru flywheel nke mejupụtara ihe, condensers, na coils, abụọ nke ọ bụla n'ihi na e nwere abụọ cylinders. Ka oge na-aga, ihe ndị a dị njọ na mkpa dochie. Ị nwere ike ịhụ site na foto dị n'okpuru ebe ahụ na epoxy nke na-ekpuchi windo windo ahụ gbawara. Nke a bụ nsogbu nkịtị na ochie OMC motors. Na-enweghị nnọchi, mmiri ọ bụla dị na engine ga-eme ka akpụkpọ ụkwụ dị mkpụmkpụ ma ọ bụ arc nke ga-eme ka ị na-eme ka ọkụ ghara ịmị mma iji mee ka ụgbọ ahụ na-agba ọsọ nke ọma, karịsịa na nnukwu ọsọ. Ma eleghị anya, 9 si na 10 nke motọ ndị ahụ dị taa nwere ọnyá n'otu ọnọdụ ahụ dịka ndị ahụ dị n'okpuru. Ọkpụkpọ ọhụrụ dị elu karịa OEM mbụ n'ihi na ọ dị iche iche na-agwọ ọrịa nke na-agaghị enwe nsogbu a. Ọhụrụ ihe, condensers, na coils bụ ezigbo mma ma na-eme na mmalite. Akụkụ ndị a dị ebe niile ma dị oke ego.
Mgbanye Parts Mkpa
Wepu Old Coils - A na-edebe ihe nkedo ọ bụla site na otu phillips na isi ihe abụọ. Jide n'aka na ị ga-eji ndị nkedo nke kwesịrị ekwesị na kposa ndị a ka ha ghara ịghọ ndị mebiri emebi. Ozugbo kpochapụrụ kpochapụrụ, kpochapụ wires ndị na-acha akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie ma na-acha uhie uhie ma gbanye mgbụ ọkụ nkwụ.
Old Gbawara Coils
Old Coils Dapụsịa Apart
Ndị ochie coils kpamkpam dara iche n'oge mwepụ usoro.
Wepu Old Points na Condensers - Wepu retainer clip na n'elu nke rocker post. Ozugbo clip a na-ewepụ, ị nwere ike wepu moveable ọkara nke ihe site Anam Udeme ya na gbanyụọ rocker post.
Emebi Point Retainer Clip
Wepụ Condenser na Points
Mgbanye Parts wepu
Next, wepụ na-abụghị moveable ọkara nke ihe. Ekwela iwepu ngbanwe. Ntugharị nhọta adịghị etinye isi ihe na tebụl stator na ekwesịghị ka ewepụ ya. Ntugharị ngbanwe bụ nkedo nke dị ntakịrị na nke dịpụrụ anya site na crankshaft ma daba n'ime oghere elongated na isi. Debe ihe nkedo nke na-ewepu isi ihe. Nke a bụ nkedo nke kacha dịrị nso na crankshaft. Debe ma wepu wiil na condenser wires nke na-ejikọta na isi. I nwekwara ike iwepu condenser.
Wepụ na Hichaa Stator Base - Iji nyocha nke carburetor, gbadaa isi ihe stator ma hichaa dị ọcha na ákwà. Ọ bụrụ na ị nwere ikuku a na-agbakọ, kpochapụ ájá ọ bụla na carburetor.
Kwụpụ họtara oge tupu
Stator Base wepu
Ugbu a, na ị nwere gị coils, ihe, na condensers wepụrụ gị stator isi kpochara, ị dị njikere ịchịkọtaghachi ihe mgbanye usoro na ọhụrụ akụkụ.
Wụnye, Nịm, ma nwalee New Points - Ọ bụrụ na ịchọrọ ka moto gị na-agba ọsọ nke ọma, a ghaghị ịwụnye isi ihe gị, setịpụ, ma nwalee iji jide n'aka na ha mepee ma mechie na kpọmkwem oge kwesịrị ekwesị. Nke a na-ekpebi mgbe nkwụnye ọkụ gị ga-agbanye ọkụ, na-ewepụ combustion n'ime gị. Ị ga-enwe ike ịkọwa kpọmkwem mgbe e debere isi ihe gị n'ụzọ ziri ezi site na ịnwale ha na ule di na nwunye na-eduga na mita ohm.
Emebi Point Test Leade
Nri Test Leade Site Stator Base
Nweta otu njedebe nke ule na-ebute site na ala nke isi ihe stator na-esote otu n'ime ihe ntanye gị. A ga-eji nke a maka ule na a ga-ewepụ ya mgbe a gbanwere isi ma nwalee. Nweta otu njedebe nke ule na-ebute site na ala nke isi ihe stator na-esote otu n'ime ihe ntanye gị. A ga-eji nke a maka ule na a ga-ewepụ ya mgbe a gbanwere isi ma nwalee.
Emebi Point Base
Emebi Point rocker
Ịghasa Down emebi Point Base
Jiri mmanu na-eme ka ihe na-eme ka ị na-agbanye mgbọrọgwụ. Jide n'aka na ị na-etinye uwe na-ekpo ọkụ nke griiz na ihe mgbakwunye. Lubricate cam na site na itinye obere griiz na isi ya na mkpịsị aka gị ma na-ehichapụ obere mkpuchi n'elu cam mgbe ọ na-atụgharị ụrọ. Otu ụzọ dị mfe iji gbanwee mpempe akwụkwọ ahụ n'elu moto a bụ iji aka na-agbadata ma gbanwee ya. Debe akụkụ na-enweghị atụgharị nke isi ihe dị na ntọala ihe eji eme ihe site n'ịnọnye ya n'elu nlele nhazi na ịkwado ya ka i wee nwee ike ịwụnye ihe nkedo ahụ. Wụnye ihe nkedo na nkedo akwa. Debe akụkụ ndị na-agagharị agagharị nke isi ihe ndị dị na isi ihe dị elu wee pịa ya. Ọ ga-adị gị mkpa ịmịpu mmiri ahụ ka ọ dabara n'ime ihe mpempe akwụkwọ. Debe ihe ntinye aka na ntinye elu ma debe ya ka o wee wepuo ya. Na-etinye mmiri retainer clip n'elu mmiri na ewepụghị mpempe metal na esetịpụ mmiri erughị ala. Jide n'aka na ekwuputara flair na ala nke obere clip a site na ogwe aka na-agbaji ka ọ ghara igbochi oghere nke isi.
Tee Crankshaft cam na Michael
Mgbanye emebi Point cam Top pụrụ isi chọta
Emebi Point Spring Retainer Clip
Gbanyụọ ákwà mgbochi ka ogwe aka na-agbaji ogwe aka na-adị n'elu elu nke cam. Ihe dị elu na cam bụ okwu "TOP" zoro ezo n'ebe dị elu. Iji nkwụnye ego, gbanwee ọdịiche ahụ na .020 nke anụ ọhịa ahụ site na ịgbanye ngbanye mgbanwe. Onye na - akwụ ụgwọ na - arụ ọrụ .020 ga - enwe ike idozi ihe dị n'etiti isi abụọ kọntaktị. Ọ dịghị mkpa iji oge dị ukwuu na-echefu 020 ọdịiche kpọmkwem. Nke a .020 ọdịiche bụ naanị mmalite nke ị ga-esi gbanwee dịka ị ga-ahụ na usoro ahụ. Mpeepe otu njedebe nke ule gị na-aga ebe a ga-ekpuchi wiwi na condenser waya na isi ihe.
Tụgharịa Crankshaft cam ka High Point
Clip Test ebute ka mgbanye emebi Point
Ụzọ dị mfe ma dị irè iji nwalee oge nkwụsị: Ọ bụrụ na ịnweghị ọkụ ma ọ bụ onye nyocha nyocha dị oké ọnụ iji lelee isi okwu gị, ọ dịghị mkpa ịgba ọsọ gaa ụlọ ahịa ma zụta otu. Ihe niile ịchọrọ iji nwalee oge nkedo gị bụ ihe nlekọta nke abụọ na-eduga na mita ohm ohuru iji chọpụta n'ihu. Enweghị mkpa iji nyocha nyocha n'ihi na ihe niile ị na-ekpo ọkụ dị ọhụrụ. Usoro a ga-eme ka ị gbanwee oge nkedo gị dị ka nke ọma dị ka i nwere ike ịnweta ngwa nyocha ndị dị oke ọnụ. Ịgba oge ịmalite ime ihe ọ bụla iji jide n'aka na isi ihe ndị na-agbaji gị na-emeghe ma na-emechi n'oge kwesịrị ekwesị. Ntuziaka ndị dị na elu nke ọkpụkpụ na akwụkwọ ntuziaka na-ekwu nanị ka ịhapụ ihe gị na .030 inch. Nke a bụ naanị ọnụọgụ na ọ nwere ike ma ọ bụ nwere ike ọ gaghị eme ka oge nkwụsị gị bụrụ nke ziri ezi. Ọ bụrụ na ị ga-eji usoro a kọwara n'okpuru, oge gị ga-abụ ihe ziri ezi na njedebe ikpeazụ ga-abụ na moto gị ga-agba ọsọ nke ọma ma malite mfe.
Wepu nku mkpocha ma weghachite azụ ahụ na nwa oge. Jide n'aka na oghere dị n'etiti etiti ahụ na-adabere na igodo windoel ma na-ekpuchi windo ahụ n'ọnọdụ. Gbanyụọ mmanụ na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị ghara ịgbatị ya. Ọkpụkpọ ahụ nwere oge ọhụụ na isi ya. Enwere ọhụụ abụọ na n'akụkụ nke ọzọ nke windwheel, otu maka isi ihe ọ bụla. Ihe ngosi buru ibu ga-abụ maka nọmba elekere cylinder ọnụ na obere ọkwa ọhụụ dị n'akụkụ nke ọzọ bụ maka mkpụrụ ndụ cylinder abụọ. Were pencil marking ma gosipụta akara ndị a ka ha wee nwee ike ịhụ anya.
Flywheel Oge Mark
Mgbanye Oge Ule
OGE Test Bad
Jikọta njedebe njedebe nke ule gị na-eduga na otu n'ime ndị na-eduga na mita ohm gị. Jikọọ ụzọ ọzọ nke ohmmeter gị na ala ọzọ na-eduga ule. Ka ị na-agbanwegharị oge gị na elekere anya, lelee akara ngosi oge mgbe ọ na-eru nso abụọ ahụ na ntọala aka. Ihe akara na windwheel kwesịrị ịkwaga site n'aka ekpe gaa n'aka ekpe ka ị na-agbanwegharị ikuku. Mgbe akara ngosi nke oge na flywheel dị n'agbata akara abụọ na efere ihe eji eme ihe, isi ihe ga-emeghe ma mita ohm ga-agbanwe site na 0 ruo ohms na-enweghị ngwụcha. N'ịdị egwu magneto a, ọkụ ọkụ ahụ ga-ere ọkụ dị ka isi na-emeghe.
Ọ bụrụ na ọdịiche dị na isi okwu dị oke ntakịrị, ihe ndị ahụ ga-emeghe mbubreyo ma ọ bụ mgbe akara njirimara gafere akara na ntọala ahụ. Ọ bụrụ na ọdịiche dị na isi ihe dị oke obosara, ihe ndị ahụ ga-emeghe n'isi ma ọ bụ tupu akara akara oge abanye na akara na ntọala aka. Mpịakọta a nwere obere ihe mkpuchi metal n'elu ikuku nke ị nwere ike wepu na ịnweta nkedo nhichaghari iji mepee ma ọ bụ mechie ọdịiche ahụ na isi. Mee obere mgbanwe maka nkwụsịtụ ngbanwe ahụ ruo mgbe ị ga - enweta ihe ịmeghe mgbe akara oge dị n'agbata akara abụọ ahụ na ntọala aka.
Ugbu a wụnye, setịpụ, ma nwalee isi ihe abụọ, ma ọ bụghị oge a, ị ga-eji akara ngosi dị nta n'akụkụ nke ọzọ nke flywheel. Ọzọkwa, ị nwere ike ịsaba nsị nke cam na ihe mgbakwunye na i mere na nke mbụ nke ihe ntụpọ.
Nwalee New Coils - Echela na ụdị ọhụrụ ị zụrụ dị mma. Iji Ohmmeter ma obu a Diode continuity Checker nyochaa ihe na-aga n'ihu nke windings windo nke windo. E kwesịrị ịdịgide n'etiti Green na Black edu. E kwesịrị inwe ihe dịka .9 ohm iguzo n'etiti Green na Black eduga.
Lelee mgbanye eriri igwe Primary Windings
Lelee mgbanye eriri igwe Secondary Windings
Wụnye New Coils na Condensers
Tinye a obere ego nke silicone compound ke onu maka ihe ji nkwụnye njikọ. Nke a abụghị ụdị silicone na ị na-eji mechie gị okpokoro ịwụ. Nke a na ụdị silicone sealer anaghị akpọchila. Ọ na-eje ozi na-mmiri nke gị eletriki njikọ. Ị nwere ike ịzụta a silicone sealer mgbe ọ bụla Radio Shack ma ọ bụ ngwá electronic ụlọ ahịa. Mia ebua plọg waya akpụkpọ ụkwụ jidesie gị icheku ọkụ plọg waya.
Tinye Silicone na eriri igwe na ebua nkwụnye Njikọta
Ebe ọhụrụ eriri igwe n'elu armature isi.
Ịghasa ọhụrụ coils jidesie armature isi.
A na-ejikọ waya na nkwụnye mgbanaka site na ịgbanye ya na ntanye ntinye. Ị nwere ike ịtọpụ ihe nkedo nke na-ejide waya ahụ ka i wee nwee ike iji nwayọọ gụọ ha n'ime njikọ ahụ. Gbanyụọ ọkụ ahụ na-agbanye n'ime ya ma kpoo bọọ n'elu njikọ ahụ. Nke a kwesịrị inye ezigbo akara mmiri maka njikọ a. Gbanwee ihe mkpuchi ahụ iji dozie oghere nkedo. Jigide ihe nkedo nke na-ekpuchi wiwi n 'ikuku nke ala akuku.
A na-ejikwa eriri waya nke eriri ụkwụ ahụ site na ijikọta ya na nkedo nkedo nke kachasị dị anya site na isi ihe. Foto ndị dị n'elu na-egosi ụzọ na-ezighi ezi na ụzọ ziri ezi isi na-agafe waya waya. Ịchọrọ ijide n'aka na ejirila wiwi niile gbanyee ka ha ghara ịmetụ akụkụ ọ bụla na-agagharị aka. N'ihe banyere igbe a, ejiri m waya eriri azụ n'azụ ọdụm Phillips. Ọzọkwa, ịchọrọ ijide n'aka na ọ dịghị wires nwere ike ịbanye na ha nwere ntakịrị ala ka ha ghara itinye nrụgide na njikọ ha.
Ọnọdụ eriri igwe ka ọ na-adịghị na-akpọ gara aga isi.
Tupu ị mechie ihe nkedo na-arị elu, jide n'aka na magnet a na-agagharị agafeghị ebe mgbago ahụ dị na isi nke ogwe aka. Ọ bụrụ na a na-etinye igbe ahụ ka magnet gbasaa n'ihu isi a, magnet ahụ ga-emetụ aka n'ime elu nke flywheel.
Jikọọ wires na-emebi ihe.
Egosiputa ọhụrụ condenser on armature isi.
Ịghasa eriri igwe na condenser waya emebi ihe.
Jikọọ njikọ eriri na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-ejikwa eriri condenser waya na isi. Gaa condenser ahụ na isi ya na-ebugharị ihe. Jigide njide ahụ na-ejide condenser na waya mkpuchi. Kpachara anya ka ị ghara iji nlezianya mee ihe a ma ọ bụ wepu isi ihe ndị a n'ihi na nke a nwere ike imenye ihe ndị ị gbanwere.
New magnedo mgbanye usoro.
Gị okokụre mgbanye System ga-ele anya dị ka nke a.
Kedo sikwuo Flywheel aku
Dochie flywheel na snugly ikesiike na flywheel nut. Ọ bụrụ na ị nwere a torque spana, torque na flywheel nut banyere 45 ụkwụ pound.
Lelee maka ebua - Wepụ ochie icheku ọkụ plọg. Iji a ụzọ agịga-imi ngwa mkpaji, agbatịnụ ọgwụgwụ nke ochie icheku ọkụ plọg ma jikọgharịa ochie plọg ha wires. Mgbe na-ejide ndị isi nke ochie icheku ọkụ plọg ka n'ala, bugharia flywheel malite ma site n'aka ma ọ bụ site na-atụgharị na flywheel nut na a spana. Ị ga-ahụ a ike icheku ọkụ jumping ọdịiche nke gị ochie plọg.
Lelee maka ebua
Ọdịiche na Wụnye New spak plọg - Iji a feeler nlele, kpatụ ọdịiche gị spak plọg ọhụrụ ka .030 inch. The ọhụrụ plọg agaghị abịa nke igbe na ziri ezi ọdịiche na ọdịiche na plọg bụ a dị mfe usoro a na-eleghara anya. Ọ bụrụ na ị na-adịghị a pụrụ iche ngwá ọrụ maka ukpụhọde ebua nkwụnye ọdịiche, i nwere ike iji a mma agụba hụkwuo ọdịiche ma ọ bụ ejighị ya kpọrọ enweta njedebe nke nkwụnye na ihe ike imechi ọdịiche. Wụnye ọhụrụ icheku ọkụ plọg na gị mgbanye usoro bụ na-ekiri-elu.